Global Voices teny Malagasy » Nahafaty Olona Sivy Ny Tondra-drano Tany Romania, An’Arivony Nafindra Toerana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2013 3:45 GMT 1	 · Mpanoratra Tamara Gocmanac Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Romania, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Voina
Olona sivy ny fantatra fa namoy ny ainy tamin'ny tondra-drano niserana vetivety nanenika ny manodidina ny seranan'i Danube tao Galati  izay any atsinanan'i Romania. Nahatratra toerana 21 ny fihoaran'ny rano ary naharava tanimboly an-jatony hekitara, voakisaka ihany koa ny lalamby ka niteraka fivoahan'ny fiaran-dalamby tsy misy olona tamin'ny lalany.
Nahatery ny olona an'anarivony handao ny tranony any atsinanan'i Romania tao anatin'ny efatra andro farany ihany koa ny tondra-drano. Niteraka fiakaran'ny rano haingana dia haingana tamin'ny alakamisy 12 septambra 2013 lasa teo ny oram-batravatra. Anisan'ny namoy ny ainy ny zazavavy kely valo taona  voafoaka tamin'ny tanan'ny rainy.
Mpamonjy voina sy ny tompontany manavatsava ny rano nihoatra tany atsinanan'i Romania; sary nozaraina noho ny fahatsaram-pon'ny Balkan Inside , nampiasaina noho ny fahazoan-dalana Creative Commons.
Niteny i Eugen Chirita, mpitondratenin'ny sampana mpamonjy voina ao amin'ny faritra Galati: “Ny antotanisa hatramin'ny alakamisy teo dia manome sivy maty, 6.900 nafindra toerana ary 1.735 ny trano difotry ny rano.”
Kaomiseran'ny Vondrona Eoropeana ho an'ny Fifandaisana Iraisampirenena , Fanampiana mahaolona ary famaliana ny krizy Kristalina Georgieva no nisioka :
Tondradrano Romania 9 niharam-boina sy fahapotehana betsaka. Nampihetsika mpiasa arivo ny manampahefana. Noho ny fahamaroan'ny orana mety mbola ho avy dia efa mijoro izahay raha ilaina ny fanampiana
Manontany tena  ny mpisera Twitter iray, @FauziPewarisPG , raha vokatry ny fikorontanan'ny toetrandro izao:
Miakatra ny fahatetehana sy ny herin'ny tondradrano eto Eoropa. Mariky ny fikorontanan'ny toetr'andro daholo izany
Jim Bedient , mpijery ny toetrandro sady astronoma (mpandinika ny kintana), nisioka  avy any Ukraine:
Tondra-drano – Galati, Romania : TONDRA-DRANO
Mandritra izany fotoana izany, mpamonjy voina, miaramila ary polisy an'arivony no miasa, raha lazaina ho manangom-baovao momba ny toe-draharaha eny an-kianja ny Praiminisitra Romaniana Victor Ponta . Ny lahatsary eto ambany no mampiseho ny habetsaky ny fahapotehana sy ny fiakatry ny rano, raha eo am-pamonjena ny biby fiompy ny mpamonjy voina sy ny mponina ao an-toerana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/21/52014/
 zazavavy kely valo taona: http://www.rri.ro/en_gb/flooding_in_eastern_romania-6392
 Balkan Inside: http://www.balkaninside.com/
 Kaomiseran'ny Vondrona Eoropeana ho an'ny Fifandaisana Iraisampirenena: https://twitter.com/KGeorgievaEU
 September 13, 2013: https://twitter.com/KGeorgievaEU/statuses/378459991281106944
 Manontany tena: https://twitter.com/FauziPewarisPG/status/378432953988030464
 September 13, 2013: https://twitter.com/FauziPewarisPG/statuses/378432953988030464
 Jim Bedient: https://twitter.com/airDX
 September 13, 2013: https://twitter.com/airDX/statuses/378591532799885313